Mwari Ari Pose Pose Here? | Vaverengi Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Persian Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa kuti Mwari ari pose pose. Somuenzaniso, New Catholic Encyclopedia inotaura nezvaMwari ichiti “munhu anogara pose pose uye muzvinhu zvose zvakasikwa.” Murume anonzi John Wesley uyo akatanga chechi yeMethodist, mune imwe mharidzo yake akataura kuti: “Hakuna nzvimbo isina Mwari, Mwari ari pose pose.”
Bhaibheri rinotiwo kudii? Ndizvo here kuti Mwari anowanikwa ari pose pose, kudenga, panyika kana kuti muvanhu panguva imwe chete?
Bhaibheri rinotaura kuti Mwari ane nzvimbo yake yaanogara, kureva iwo matenga. MuBhaibheri mune munyengetero waMambo Soromoni uyo akakumbira Mwari kuti: “Teererai muri kumatenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara isingachinji.” (1 Madzimambo 8:43) Jesu Kristu paaidzidzisa vadzidzi vake kunyengetera, akavaudza kuti vanyengetere kuna “Baba vedu vari kumatenga.” (Mateu 6:9) Bhaibheri rinotaura kuti pashure pokunge Jesu amutswa akapinda “mudenga chaimo, zvino kuti aoneke pamberi paiye Mwari.”—VaHebheru 9:24.
Ndima idzi dzinoratidza kuti Jehovha Mwari anogara kudenga, kwete kuti ari pose pose. Asi ndima idzi hadzisi kureva kuti Jehovha anogara ‘mumatenga’ atinoona nemaziso. Musiki wezvinhu zvose haakwani kugara mumatenga atinoona. (1 Madzimambo 8:27) Bhaibheri rinotaura kuti “Mwari Mudzimu.” (Johani 4:24) Saka anogara kunzvimbo ine zvisikwa zvisiri zvenyama.—1 VaKorinde 15:44.
Zvakadini nendima dzeBhaibheri dzinoita sedzinobudisa pfungwa yokuti Mwari ari pose pose? Somuenzaniso, pana Pisarema 139:7-10, Dhavhidhi akataura nezvaMwari achiti: “Ndingaenda kupi kusina mudzimu wenyu, ndingatizira kupi kuti ndibve pamberi pechiso chenyu? Kana ndikakwira kudenga, munenge muriko; kana ndikatambanudza mubhedha wangu muSheori, tarirai! munenge murimo. Kudai ndaizotora mapapiro emambakwedza, kuti ndigare kugungwa riri kure kwazvo, ruoko rwenyu rwaizonditungamirira ikokowo.” Ndima idzi dzeBhaibheri dziri kuratidza here kuti Mwari ari pose pose, kuti anogara munzvimbo dzose dzataurwa idzi?
Cherechedza kuti Dhavhidhi anotanga nokubvunza kuti: “Ndingaenda kupi kusina mudzimu wenyu?” * Achishandisa mudzimu mutsvene wake, Mwari anogona kuona zvose uye kushandisa simba iri kuita zvaanoda asingabvi hake paanenge ari. Kuti tione kuti izvi zvinoita, mumakore apfuura masayendisiti akakwanisa kuongorora ivhu riri papuraneti inonzi Mars iyo iri kure nemamiriyoni emakiromita kubva pano pasi. Vakazviita sei? Havana kuendako, asi vaitumira zvitundumuseremusere izvo zvaizodzosa mashoko uye mifananidzo kubva kupuraneti iyi.
Saizvozvowo, Jehovha Mwari haafaniri hake kuva pose pose kuti azive zviri kuitika pose pose. Shoko raMwari rinoti: “Hapana chisikwa chaasingaoni.” (VaHebheru 4:13) Saka simba raJehovha kana kuti mudzimu mutsvene unogona kuenda pose pose zvichiita kuti Mwari aone zvose obva aita zvaanoda ari panzvimbo imwe chete, iyo ‘nzvimbo yake tsvene’ iri kumatenga.—Dheuteronomio 26:15.
^ ndima 8 Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “mudzimu” pano riri kureva simba raMwari raanoshandisa kuita zvaanoda.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Ari Pose Pose Here?